Ibuprofen (အိုင်ဘူပရိုဖန်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Ibuprofen (အိုင်ဘူပရိုဖန်)
Ibuprofen (အိုင်ဘူပရိုဖန်) ကဘာလဲ။
ရေးသားသူ Dr. Thiha Phyo Myint ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win
Generic Name: Ibuprofen (အိုင်ဘူပရိုဖန်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Ibuprofen (အိုင်ဘူပရိုဖန်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Ibuprofen ကို ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကြွက်သားနာခြင်း၊ အရွတ်နာခြင်း၊ သွားကိုက်ခြင်း၊ ဓမ္မတာလာစဉ် ကိုက်ခဲခြင်းစသည်တို့အတွက် အသုံးပြုပါသည်။၎င်းကို အဖျားကျစေရန်နှင့် တုပ်ကွေး သို့မဟုတ် အအေးမိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော သာမန်နာကျင်ကိုက်ခဲမှုများ အတွက်လည်း သုံးနိုင်ပါသည်။ Ibuprofen သည် စတီးရွိုက်မဟုတ်သော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး (NSAID) အုပ်စုဝင် ဆေးတမျိုးဖြစ်ပြီး ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေသော ပစ္စည်းများကို ခန္တာကိုယ်မှ ထုတ်ခြင်းအား တားဆီးခြင်းဖြင့် ဆေးအာနိသင်ပြစေသည်။ ထို့ကြောင့် နာကျင်ကိုက်ခဲရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေပြီး အဖျားကျစေပါသည်။
သင်သည် အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်းကဲ့သို့ နာတာရှည်အခြေအနေများအတွက် အသုံးပြုလိုပါက အခြားဆေးများကို အသုံးပြုသင့်ပြီး ဆေးဝါးအပြင် အခြားသော ကုသမှုများကိုလည်း ခံယူသင့်သဖြင့် ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
ဆေးထုတ်လုပ်သူများသည် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ပြောင်းလဲတတ်ကြလေ့ရှိ သဖြင့် သင်အသုံးပြုနေကျ တံဆိပ်ဖြစ်လျှင်ပင် မည်သည့်ပစ္စည်းများ ပါဝင်ကြောင်း သိရှိနိုင်ရန် အညွှန်းကို ဖတ်ပါ။ အချို့သော ဆေးများသည် ဆေးတံဆိပ် ခပ်ဆင်ဆင်တူသော်လည်း ပါဝင်သော ပစ္စည်းများမှာမူ မတူညီဘဲ ရည်ရွယ်ချက်လည်း မတူညီတတ်ပေ။ မှားယွင်းသော ဆေးကို အသုံးပြုမိပါက သင့်ကိုဘေးဥပါဒ်ဖြစ်စေမည်။
အခြားအသုံးပြုမှုများ။ ။ဤနေရာတွင် ဖော်ပြမည့် အသုံးပြုပုံများသည် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသော ဆေးအညွှန်းတွင်မပါဝင်သော်လည်း သင့်ဆရာဝန်က ညွန်းဆိုသော အသုံးပြုမှု အခြေအနေများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြမည့် ရောဂါအနေအထား အတွက် Ibuprofen ကို အသုံးပြုမည်ဆိုလျင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက် ရှိမှသာ အသုံးပြုသင့်သည်။
Ibuprofen ကို ဂေါက်ရောဂါ အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
Ibuprofen (အိုင်ဘူပရိုဖန်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
အကယ်၍ သင်သည် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက် မလိုသော ဆေးများကို မိမိဖာသာ ဝယ်ယူသုံးစွဲပါက Ibuprofen ကို မသောက်သုံးမီ ဆေးညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် အသုံးပြုပါက ဆေးကို စတင်အသုံးမပြုခင် သို့မဟုတ် ဆေးကုန်သွား၍ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တိုင်းတွင် ဆေးဆိုင်မှ ပေးလိုက်သည့် ဆေးညွှန်းစာရွက်ကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ရှုပါ။ မရှင်းလင်းသည်များ ရှိလျှင် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ကို မေးမြန်းပါ။Ibuprofen ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း (အများအားဖြင့် ၄နာရီခြား သို့မဟုတ် ၆နာရီခြားတကြိမ်) ရေတဖန်ခွက်အပြည့်ဖြင့် သောက်ပါ။ ဆေးသောက်ပြီး အနည်းဆုံး ၁၀မိနစ်ခန့်အကြာထိ လဲလျောင်းခြင်းမပြုရ။ အစာအိမ်ထိခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဆေးကို အစာ၊နွားနို့ သို့မဟုတ် အစာအိမ်ဆေးများနှင့် တွဲသောက်ပါ။
ဆေးပမာဏ အနည်အများသည် သင်၏ ရောဂါအခြေအနေ နှင့် ဆေးကို တုန့်ပြန်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို တတ်နိုင်သရွေ့ လျှော့ချနိုင်ရန်နှင့် အစာအိမ်သွေးယိုခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ဆေးကို ဖြစ်နိုင်သမျှ အနည်းဆုံးပမာဏဖြင့် စတင်ပြီး ဖြစ်နိုင်သမျှ ကာလအတိုဆုံးသောက်သင့်သည်။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသည့်ပမာဏ သို့မဟုတ် ကာလထက် ပိုသောက်ခြင်း မပြုရ။ အထူးတလည်ညွှန်ကြားထားခြင်းများ မရှိလျှင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက် မလိုသော ဆေးများကို ဆယ်ရက်ထက် ပိုမသောက်ရပါ။ တာရှည်စွဲသောက်ရမည့် ရောဂါများ (ဥပမာ။ ။ အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း)အတွက် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ဆက်လက်သောက်သုံးပါ။
ကလေးများတွင် အသုံးပြုသော ဆေးပမာဏသည် ကလေး၏ ကိုယ်အလေးချိန်ပေါ်တွင်ပါ မူတည်ပါသည်။ သင့်ကလေး၏ ကိုယ်အလေးချိန်နှင့် ကိုက်ညီသော ဆေးပမာဏကို သိရှိနိုင်စေရန် ဆေးညွှန်းကို သေချာစွာ ဖတ်ရှုပါ။ မရှင်းလင်းသည်များရှိပါက သို့မဟုတ် အကူအညီလိုအပ်ပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
အချို့သောရောဂါများ (ဥပမာ။ ။ အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း)အတွက် အသုံးပြုပါက ဆေးအာနိသင် အပြည့်အဝပြရန် ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်ခန့် အချိန်ယူရလေ့ရှိပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် Ibuprofen ကို ပုံမှန်သုံးစွဲနေခြင်း မဟုတ်ဘဲ လိုအပ်မှ သုံးစွဲသည်ဆိုလျှင် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများသည် စ,နာသည်နှင့် ချက်ချင်း သောက်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး ပိုမို နာကျင်လာသည့်အချိန်မှ သောက်လျှင် လိုအပ်သည့် ဆေးအာနိသင်လုံလောက်စွာမရ ဖြစ်တတ်ကြောင်းကို သိထားရမည်။
သင့်ရောဂါအခြေအနေ မသက်သာလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် သို့မဟုတ် ဆိုးရွားပြင်းထန်သော ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီဟု ယူဆလျှင် ဆေးကုသမှုကို အမြန်ဆုံး ခံယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မလိုသော ဆေးများကို (ဖျားနာခြင်း သို့မဟုတ် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းများအား ကုသရန်) သင့်အတွက် သို့မဟုတ် သင့်ကလေးအတွက် သုံးစွဲပါက ၃ရက်ကြာသည်အထိ အဖျားမကျလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် သို့မဟုတ် ၁၀ရက်ကျော်ကြာသည်အထိ နာကျင်ခြင်း မသက်သာလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်ထံ အမြန်ဆုံးပြသပါ။
Ibuprofen (အိုင်ဘူပရိုဖန်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Ibuprofen ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ ibuprofen ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ ibuprofen ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Ibuprofen ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Ibuprofen ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Ibuprofen (အိုင်ဘူပရိုဖန်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Ibuprofen ကို မသောက်သုံးမီ
သင့်အနေဖြင့် Ibuprofen ၊ aspirin သို့မဟုတ် အခြား NSAIDများ (ဥပမာ။ ။ketoprofen (Orudis KT, Actron)၊ naproxen (Aleve, Naprosyn)) သို့မဟုတ် အခြားသော အကိုက်အခဲပျောက် အဖျားကျဆေးများ သို့မဟုတ် အခြားဆေးဝါးတမျိုးမျိုး သို့မဟုတ် Ibuprofen တွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများရှိပါက ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။ အဆိုပါ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို သိရှိလိုပါက ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပါ။
သင်လက်ရှိ သုံးစွဲနေသော ဆေးများ သို့မဟုတ် သုံးစွဲရန် အစီအစဉ်ရှိသည့် ဆေးများ (ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်ဆေး၊ မိမိဖာသာ သောက်သည့်ဆေး၊ဗီတာမင်အားဆေး၊သဘာဝအားဖြည့်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်)ကို သင့်ဆရာဝန်အား သေချာစွာ ပြောပြပါ။ အောက်ပါ ဆေးများကို သုံးစွဲနေပါက ဆရာဝန်ကို မမေ့မလျော့ ပြောပြပါ။
angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors such as benazepril (Lotensin),captopril (Capoten), enalapril (Vasotec), fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestril),moexipril (Univasc), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril), ramipril (Altace),trandolapril (Mavik); Diuretics ; lithium (Eskalith, Lithobid);methotrexate (Rheumatrex).
သင့်ဆရာဝန် အနေဖြင့် ဆေးပမာဏများကို ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်ခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာဝန်မှ အထူးတလည်ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိလျှင် အခြားသော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများကို Ibuprofen နှင့် တွဲမသုံးပါနှင့်။
သင့်တွင် ပန်းနာရင်ကျပ်ရှိလျှင် အထူးသဖြင့် နှာခေါင်းပိတ်ခြင်း၊နှာရည်ယိုခြင်း သို့မဟုတ် နှာခေါင်းအတွင်းသားရောင်ရမ်းခြင်းများ မကြာခဏဖြစ်ပါက၊ခြေလက်များ ဖောရောင်ပါက၊သင့်ခန္တာကိုယ်က ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်တစ်ရှူးများ နှင့် ကိုယ်အဂါၤများ (အများအားဖြင့် ကျောက်ကပ်၊အရေပြား၊အဆစ်အမြစ်၊သွေးစသည်)ကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက် အန္တရာယ်ပေးသော Lupus ဟုခေါ်သည့် အခြေအနေတမျိုးရှိပါက သို့မဟုတ် ကျောက်ကပ် သို့မဟုတ်အသည်းရောဂါများရှိပါက ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။ အကယ်၍ သင်သည် Ibuprofen ကို ကလေးသူငယ်များတွင် အသုံးပြုပါက ကလေးရေကောင်းကောင်းမသောက်လျှင် သို့မဟုတ် ထပ်တလဲလဲအန်ခြင်း ၊ဝမ်းလျှောခြင်းတို့မှ ရေဓါတ်များစွာ ဆုံးရှုံးလျှင် ကလေးဆရာဝန်ထံ အမြန်ပြသပါ။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင် (အထူးသဖြင့် လ အတော်ရင့်နေလျှင်)၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်ရှိလျှင် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေလျှင်၊ဆေးသောက်နေရင်း ကိုယ်ဝန်ရှိလာလျှင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။
သွားနှုတ်ခြင်းအပါအဝင် အခြားသော ခွဲစိတ်ကုသမှုများ ခံယူရန်ရှိပါက Ibuprofen သောက်သုံးလျက်ရှိကြောင်း ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။
phenylketonuria (ဝေဒနာရှင်များအတွက် စနစ်တကျသတ်မှတ်ထားသော အစားအသောက်ပုံစံအတိုင်းမစားပါက ဉာဏ်ရည်ချို့တဲ့ခြင်းကို ဖြစ်စေသော မွေးရာပါ ရောဂါတမျိုး) —–> ဆေးမသောက်မီ ဆေးညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။ အချို့သော Ibuprofen ဆေးများသည် phenylalanine ၏ မူလရင်းမြစ်ဖြစ်သော aspartame ပါဝင်တတ်၍ ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Ibuprofen (အိုင်ဘူပရိုဖန်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် D ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။)
Ibuprofen (အိုင်ဘူပရိုဖန်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါလက္ခဏာများ ခံစားရပါက Ibuprofenသောက်သုံးခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ပြသပါ။
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊အားနည်းခြင်း၊အသက်ရှုမဝခြင်း၊စကားပီပီသသ မပြောနိုင်တော့ခြင်း၊ အမြင်အာရုံ သို့မဟုတ် ခန္တာကိုယ်ဟန်ချက်ထိန်းခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ခံစားရခြင်း။
ကတ္တရာစေးကဲ့သို့ ဝမ်းမည်းမည်းများ သွားခြင်း။
ချောင်းဆိုးသွေးပါခြင်း သို့မဟုတ် ကော်ဖီအနှစ်ရောင်များ အန်ခြင်း။
ဆီးနည်းသွားခြင်း သို့မဟုတ် လုံးဝ မသွားတော့ခြင်း။
ပျို့အန်မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ဗိုက်အပေါ်ပိုင်း နာ/အောင့်ခြင်း၊ယားယံခြင်း၊အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ဆီးမည်းခြင်း၊ဝမ်းဖြူဖြူများသွားခြင်း၊မျက်စိ သို့မဟုတ် အသားဝါခြင်း။
သွေးခြေဥခြင်း၊ပြင်းထန်စွာ ထုံနာကျဉ်နာဖြစ်ခြင်း၊ ကြွက်သားအားနည်းခြင်း။
ဖျားခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ဇက်တောင့်ခြင်း၊ချမ်းတုန်ခြင်း၊အလင်းရောင်မခံနိုင်ခြင်း၊အရေပြားပေါ်တွင် ခရမ်းရောင် အစက်လေးများပေါ်လာခြင်း၊တက်ခြင်း။
ဗိုက်နာ/အောင့်ခြင်း၊ အနည်းငယ် ရင်ပူခြင်း သို့မဟုတ် အစာအိမ်နာခြင်း၊ဝမ်းလျှောခြင်း သို့မဟုတ် ဝမ်းချုပ်ခြင်း။
အသားယားခြင်း သို့မဟုတ် အစက်များထွက်ခြင်း။
နားထဲတွင် အသံများ ကြားနေရခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Ibuprofen (အိုင်ဘူပရိုဖန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Ibuprofen ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အထူးသဖြင့်
အက်စ်ပရင် နှင့် အခြား NSAIDs —-> naproxen (Aleve, Naprosyn, Naprelan, Treximet),celecoxib (Celebrex), diclofenac (Arthrotec, Cambia, Cataflam, Voltaren, Flector Patch, Pennsaid, Solareze), indomethacin (Indocin), meloxicam (Mobic)
နှလုံးရောဂါပျောက်ဆေး သို့မဟုတ် သွေးကျဆေးများ —–> benazepril (Lotensin), enalapril (Vasotec),lisinopril (Prinivil, Zestril), quinapril (Accupril), ramipril (Altace)
ဆီးဆေးများ —–> furosemide (Lasix)
steroids (prednisone နဲ့ အခြားဆေးများ)
သွေးကျဲဆေးများ —-> warfarin (Coumadin, Jantoven)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Ibuprofen (အိုင်ဘူပရိုဖန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Ibuprofen က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Ibuprofen (အိုင်ဘူပရိုဖန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Ibuprofen ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
ကျောက်ကပ် သို့မဟုတ် အသည်းရောဂါရှိခြင်း။
အစာအိမ် သို့မဟုတ် အူအနာရှိခြင်း သို့မဟုတ် ထိုအနာမှ သွေးယိုခြင်း။
လေဖြတ်ဖူးခြင်း —–> အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေတတ်သဖြင့် သတိထားသုံးပါ။
အက်စ်ပရင် ဆေးပြားကြောင့် ပိုဆိုးစေသော ပန်းနာရင်ကြပ်ရှိလျှင်။
အက်စ်ပရင် ဆေးပြားနှင့် ဓါတ်မတည့်သည့် ရာဇဝင်ရှိခြင်း —-> ထိုလူနာများတွင် လုံးဝအသုံးမပြုရပါ။
ဆီးချိုရှိခြင်း —–> ibuprofen ဆေးရည်သည် သကြားဓါတ်ပါဝင်နိုင်သဖြင့် သတိနှင့် သုံးပါ။
နှလုံးခွဲစိတ်ခြင်း ——> ခွဲစိတ်မှု မပြုလုပ်မီ သို့မဟုတ် ပြုလုပ်ပြီးချိန်တွင် အနာသက်သာစေရန် ibuprofen ကို အသုံးမပြုရပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Ibuprofen (အိုင်ဘူပရိုဖန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ ibuprofen ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
ဓမ္မတာလာစဉ် ကိုက်ခဲခြင်းအတွက် :
၂၀၀ – ၄၀၀ မီလီဂရမ်ကို ၄နာရီခြား သို့မဟုတ် ၆နာရီခြား တကြိမ် လိုအပ်သလို သောက်နိုင်သည်။
ကနဦးဆေးပမာဏ : ၄၀၀ – ၈၀၀ မီလီဂရမ်ကို ၆နာရီခြား သို့မဟုတ် ၈နာရီခြား တကြိမ် သောက်နိုင်သည်။
Rheumatoid arthritis အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါအတွက်
Electroconvulsive therapy (ECT) ကြောင့်ဖြစ်သော ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် :
၆၀၀ မီလီဂရမ်ကို ECT မလုပ်မီ မိနစ်၉၀ကြိုတင်၍ သောက်ရမည်။
သောက်ဆေး : အတန်အသင့် နာကျင်ခြင်းများအတွက် :
၂၀၀ – ၄၀၀ မီလီဂရမ်ကို ၄နာရီခြား သို့မဟုတ် ၆နာရီခြား တကြိမ် လိုအပ်သလို သောက်နိုင်သည်။၄၀၀ မီလီဂရမ်ထက်ပိုပေးလျှင် ဆေးအာနိသင်မှာ ပိုမိုထူးခြားလာခြင်းမရှိတော့ဟု ဆိုပါသည်။
အကြောသွင်းဆေး : (Ibuprofen အကြောသွင်းဆေးမပေးမီ လူနာကို ရေဓါတ်ကောင်းစွာ ပေးထားရန်လိုပါသည်) :
နာကျင်ခြင်းအတွက် : ၄၀၀ – ၈၀၀ မီလီဂရမ်ကို တခါသွင်းလျှင် မိနစ်၃၀နှုန်းဖြင့် ၆နာရီခြားတကြိမ်ပေးနိုင်သည်။
အဖျားတက်ခြင်းအတွက် : ကနဦးဆေးပမာဏ : ၄၀၀ မီလီဂရမ်ကို တခါသွင်းလျှင် မိနစ်၃၀နှုန်းဖြင့် သွင်းရမည်။
ဆက်လက်ပေးထားရန် ဆေးပမာဏ : ၄၀၀ မီလီဂရမ်ကို ၄နာရီခြား သို့မဟုတ် ၆နာရီခြားတကြိမ် သို့မဟုတ် ၁၀၀ – ၂၀၀ မီလီဂရမ်ကို ၄နာရီခြားတခါ ပေးရမည်။
ကလေးတွေအတွက် Ibuprofen (အိုင်ဘူပရိုဖန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးငယ်တွေမှာ ibuprofen ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
ကလေးလူနာများမှာ ဘယ်လောက်အချိုးအစားပေးရမလဲဆိုတာ အတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်မှာ စိတ်ချရမှုအနေအထားကို အပြည့်အဝနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များ ထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
အသက် ၆လမှ ၁၂နှစ် အထိ :
ကိုယ်အပူချိန် ၁၀၂.၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ( ၃၉.၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ထက် နည်းလျှင် 5mg/kg/dose ပမာဏကို ၆နာရီခြား သို့မဟုတ် ၈နာရီခြား တခါ သောက်ဆေးအဖြစ် တိုက်နိုင်သည်။
ကိုယ်အပူချိန် ၁၀၂.၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ( ၃၉.၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) နှင့် အထက် အတွက် 10mg/kg/dose ပမာဏကို ၆နာရီခြား သို့မဟုတ် ၈နာရီခြား တခါ သောက်ဆေးအဖြစ် တိုက်နိုင်သည်။
ကလေးငယ်များနှင့် ကလေးများ :4– 10 mg/kg ကို ပမာဏကို ၆နာရီခြား သို့မဟုတ် ၈နာရီခြား တခါ သောက်ဆေးအဖြစ် တိုက်နိုင်သည်။
တနေ့တာအတွက် ပေးသင့်သော ပမာဏမှာ 40mg/kg ဖြစ်ပါသည်။
စုစုပေါင်းဆေးပမာဏ 30 -40 mg/kg/day ကို သုံးကြိမ် သို့မဟုတ် လေးကြိမ် ခွဲတိုက်နိုင်သည်။ အနည်းဆုံးပမာဏမှ စသင့်ပြီး သင့်တော်သလို ချိန်ညှိသွားနိုင်သည်။ ပြင်းထန်ခြင်းမရှိသော လူနာများတွင် 20 mg/kg/day ပမာဏဖြင့် ကုသနိုင်သည်။
Cystic Fibrosis ရောဂါအတွက်
နာတာရှည် ရောဂါအတွက် (ရောဂါဖြစ်နေသောကာလ ၄နှစ် နှင့်အထက်) : သွေးတွင်းဆေးပမာဏ 50 – 100 mcg/ml တွင်ထိန်းထားနိုင်ရန် ဆေးပမာဏကို ချိန်ဆပေးခြင်းအားဖြင့် မပြင်းထန်သော အဆုတ်ရောဂါရှိသည့် ကလေးလူနာများတွင် ရောဂါဆိုးရွားလာခြင်းကို နှေးကွေးစေပါသည်။
Patent Ductus Arteriosus (မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါတမျိုး) အတွက် :
Ibuprofen lysine :
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၃၂ပတ် သို့မဟုတ် ၃၂ပတ်ထက် နည်းသော ကလေးများ ၊မွေးဖွားသည့် အချိန်တွင် ပေါင်ချိန် ၅၀၀ – ၁၀၀၀ ဂရမ်ကြားရှိ ကလေးများ :
ကနဦးဆေးပမာဏ : 10 mg/kg ကို ဦးစွာပေးပြီး နောက်ထပ် ၂၄နာရီ အကြာနှင့် ၄၈နာရီအကြာတွင် 5mg/kg ပမာဏစီ ထပ်ပေးရမည်။
Ibuprofen (အိုင်ဘူပရိုဖန်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ibuprofen ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး အချိုးအစားမျိုးတွေနဲ့ရရှိနိုင်မလဲ။
ibuprofen ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သောက်ဆေးအရည် : 100mg/5ml ။
Ibuprofen ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
ရင်သားထိပ်တွေကွဲနေလို့ ဘေဘီလေးကို နို့တိုက်ရတာ အခက်တွေ့နေတဲ့ မေမေတို့အတွက်
ခန္ဓါကိုယ်က နာကျင်မှုကို အထိရောက်ဆုံးသက်သာစေမယ့် အစားအစာ (၅) မျိုး
ကိုယ့်ဘဝအတွက် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသူတွေကို ချန်ထားခဲ့ဖို့ ဝန်မလေးပါနဲ့